Mobile Apps Development : Part4- Saturngod
Posted on Updated May 16, 2013 May 16, 2013 by saturngod
အပိုင်း ၁ ၊ အပိုင်း ၂ ၊ အပိုင်း ၃
Cross Platform နဲ့ native ကွာခြားချက်တစ်ခုက SDK ပါပဲ။ SDK တော်တော်များများဟာ native version အတွက်ပဲ ထွက်ပါတယ်။ dropbox sdk , facebook sdk စတဲ့ official version တွေဟာ native အတွက်ပဲ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း cross platform sdk တွေဟာ နာမည်ကြီး sdk တွေကို လိုက်ပြီး support ပေးပါတယ်။ ဥပမာ။ facebook sdk ကို titanium မှာ အသုံးပြုလို့ရအောင် လုပ်ထားပေးသလို dropbox , testflight စတာတွေလည်း အသုံးပြုလို့ရအောင် ဖန်တီးထားပေးပါတယ်။ Cross platform ဟာ native SDK update ဖြစ်တာနဲ့ လိုက်ပြီး update မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ။ ။ iOS SDK 6.0 ဒီနေ့ ထွက်ပြီ ဆိုပါဆို့ cross platform တွေဟာ iOS SDK 6.0 အတွက် မနက်ဖြန် လိုက်ပြီး မထွက်နိုင်ပါဘူး။ လူတိုင်း iOS 6.0 မသုံးသေးတာကြောင့် နောက်ပြီး sdk ကို upgrade လုပ်ရာမှာ လက်ရှိ app တွေနဲ့ stable ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်ရေးရတာကြောင့် ကြာတတ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကျွန်တော် Singapore PHP meetup ပွဲသွားတုန်းက ပွဲမှာ phonegap အကြောင်းပြောပြလို့ သဘောကျရင်းနဲ့ စမ်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက Phonegap စပေါ်ကာစပဲ ရှိသေးပြီး version 1.0 တောင် မရောက်သေးပါဘူး။ Phonegap version 1.0 ရောက်ဖို့ တော်တော်လေးကို ကြာပါတယ်။ အခုတော့ version 2.7 တောင် ရောက်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် လေ့လာတုန်းက အချိန်နဲ့စာရင် တော်တော်လေးကို ကွာသွားလောက်ပါပြီ။ ကျွန်တော် phonegap ကို သုံးမယ်လို့ စဉ်းစားအချိန်တုန်းက preloaded SQLite ကို read လုပ်လို့မရပဲ application ပထမဆုံး ဖွင့်ချိန်မှာ sql insert တွေထည့်ရမယ်ဆိုတာကြောင့် phonegap ကို မသုံးဖြစ်ခဲ့တော့တာပါ။
Phonegap က HTML + CSS + JS သုံးပြီးတော့ iOS , Android , Windows Phone စတာတွေကို ရေးလို့ရပါတယ်။ Phonegap သုံးထားပြီး ရေးထားတဲ့ Apps တွေကို http://phonegap.com/app/ မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Phone gap က ရနိုင်တဲ့ feature တွေကိုတော့ http://phonegap.com/about/feature/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Phonegap ဟာ HTML + CSS + JS ဖြစ်တာကြောင့် UI design အတွက် HTML web app ရေးသလိုပဲ ရေးပေးရပါတယ်။ UI design အတွက်
စတာတွေကို အသုံးပြုပြီး mobile UI ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
C# သမား များအနေနဲ့ iOS နဲ့ Android ကို ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ xamarin ရှိပါတယ်။ xamarin ကတော့ Phonegap , Titanium လိုမျိုး Free တော့ မရပါဘူး။ Free version က စမ်းရုံပဲ စမ်းလို့ရပြီး source code file size အစ limit ရှိလို့ project တစ်ခုလုံး အနေနဲ့ သုံးလို့မရပါဘူး။ Indie version က US $299 per platform and per developer ပေးရပါမယ်။ iOS , Android platform ၂ ခု အတွက် ဆိုရင် US $538.20 ကျပါမယ်။ တကယ်ကျသင့်တဲ့ $598.00 မှာ Multiple Licenses ဆိုရင် 10% လျော့ပေးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ pricing ကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ Xamarin အသုံးပြုထားတဲ့ App တွေကို http://xamarin.com/apps မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ Rdio က xamarin ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုအချိန်ထိ တစ်ခါမှ မစမ်းရသေးပါဘူး။
တကယ်လို့ game ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ cross platform ကို ရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Game အတွက် cross platform တွေကတော့ Corona က 2D game တွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ Corono နဲ့ ရေးစွဲထားတဲ့ Game တွေကို http://developer.coronalabs.com/showcase/ မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Corona က သုံးစွဲတဲ့လူလည်း များသလို tutorial တွေလည်း လွယ်လင့် တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ 3D game အတွက်ဆိုရင်တော့ Unity ရှိပါတယ်။ Angry Bird ထုတ်တဲ့ company Rovio က Bad Piggies ကို Unity နဲ့ ရေးထားတာပါ။ ဒါ့အပြင် Temple Run2လည်း Unity ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Unity ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Game တွေအများကြီးပါ။ စာရင်းကိုတော့ http://unity3d.com/gallery/made-with-unity/game-list မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
« Mobile Apps Development : Part3Mobile Apps Development : Part5»
You should mention about RubyMotion where people can write with ruby code for iOS dev.
This part is only for cross platform. Ruby motion only support for iOS. Can’t write for both. That why I didn’t mention about ruby motion.
Mobile Apps Development : Part 3